China Abenzi beengxowa zeeTya zePCA zeFayibha kunye nabathengisi | IQELA LEJIERO
Ububanzi yethu esemgangathweni yi-140mm kunye ne-160mm njl njl.
Iifilitha zeti eluhlaza, iti emnyama, iti yokhathalelo lwempilo, iti yemifuno kunye namayeza e-herbal.
I-PLA izinto ezinokuboliswa ziintsholongwane ezenziwe ngombona njengempahla ekrwada kwaye zinokubola zibe ngamanzi kunye nekhabhon diokside kumhlaba wendalo. zizinto ezinobuhlobo kokusingqongileyo. Ukukhokela kwifashoni yeti yamazwe aphesheya, ibe ngumkhwa wokupakisha iti engenakuphikiswa kwixesha elizayo.
☆ Sisicoci seti enemingxunya yeti evela kwimicu ye-polylactic, e-chemosynthesized (polymerized) ngokusebenzisa i-lactic acid fermentation evela kwiswekile yesityalo eluhlaza, ethi ngokuhamba ngokugqibeleleyo kunye nokuhamba kwamanzi, kuyenze ibe njengesihluzi samagqabi eti.
☆ Ngaphandle kwento enobungozi ifunyenwe kulingo lwamanzi abilayo. Ukuhlangabezana neMigangatho yoGutyulo lokutya
☆ Emva kokuyisebenzisa, icebo lokucoca ulwelo linokulungiswa kwebhodi ngaphakathi kwiveki ukuya kwinyanga ngokusebenzisa umgquba okanye ulungiso lwebiogas, kwaye linokubola libe ngamanzi kunye nekhabhon diokside Liza kuyitshintsha ngokupheleleyo ukuba lingcwatyelwe emhlabeni. Nangona kunjalo, isantya sokubola kuxhomekeke kubushushu bomhlaba, ukufuma, i-PH, kunye nabantu abancinci.
☆ Akukho siphumo segesi eziyingozi ezinje nge-dioxin xa itshile, ngaxeshanye, ukuveliswa kwe-GHG (njengekhabhon diokside) ngaphantsi kweplastiki eqhelekileyo.
☆ I-PLA i-polylactic acid enezinto ezinokubola
☆ I-PLA njengezinto ezinokuboliswa ziintsholongwane, ezinokuba luncedo kuphuhliso oluzinzileyo loluntu.
Egqithileyo Unxantathu wenayiloni engenanto yeti yeti
Okulandelayo: Nylon iingxowa enemingxunya yeti roll kunye tag